Layliyo iyo Tababar - Vondt.net
6 Layliyo loogu talagalay kuwa qaba Fibromyalgia
12 / 09 / 2017 /0 Comments/i fibromyalgi, Xanuun joogto ah, Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
Fibromyalgia waa cillad daba-dheeraata oo sababa xanuun baahsan iyo feejignaan dheeri ah ee dareemayaasha iyo murqaha.
Xaaladdu waxay ka dhigi kartaa tababarka caadiga ah mid aad u adag oo ku dhowaad aan macquul ahayn mararka qaarkood - sidaas darteed waxaan diyaarinay barnaamij tababar oo ka kooban 6 jimicsi fudud oo loo habeeyey kuwa leh fibromyalgia. Waxaan rajeyneynaa in tani ay ku siin karto gargaar oo ay ku siiso nolol maalmeed ka wanaagsan. Waxaan sidoo kale ku talinaynaa tababarka barkadda biyaha kulul haddii aad fursad u haysato inaad sidaas sameyso.
- Waaxyadayada edbinta ee Vondtklinikkene ee Oslo (Lambertseteriyo Viken (Eidsvoll Sound og Råholt) Dhakhaatiirteenu waxay leeyihiin karti-xirfadeed sare oo gaar ah oo ku saabsan qiimeynta, daaweynta iyo tababarka baxnaaninta ee xanuunka daba-dheeraada. Guji linksyada ama iyada si aad wax badan uga akhrido waaxyadayada.
AMAAL: Hoos u deg si aad u aragto muuqaal jimicsi oo leh jimicsiyo loogu talagalay kuwa qaba fibromyalgia, iyo si aad wax badan uga akhrido farsamooyinka nasashada.
Sidoo kale aqri: 7 Talooyin oo Loogu Adkaado Fibromyalgia
MUUQAAL: 6 Jimicsi Xoog Xoog Leh oo Fibromyalgia ah
Halkan waxaad ku aragtaa barnaamij jimicsi loogu talagalay dadka qaba fibromyalgia oo ay soo saareen chiropractor Alexander Andorff - iyada oo lala kaashanayo dhaqtarka jimicsiga jirka iyo kooxda lafa-qabatinka ee deegaanka. Guji fiidiyowga hoose si aad u aragto leylisyada.
Fibromyalgia waxaa ku jira dhacdooyin kordha oo murqaha iyo murqaha murqaha ah. Hoos waxaa ku yaal shan layli oo kaa caawin kara inaad debciso muruqyada cidhiidhiga ah iyo xiisadda.
Ma jeclayd fiidiyowyada? Hadii aad ka heshay, runtii aad baanu kuugu mahad naqaynaa inaad iska diiwaan geliso kanaalkayaga YouTube oo aad na siiso suulka warbaahinta bulshada. Micno weyn ayey noo leedahay. Mahadsanid!
Si wada jir ah dagaalka ka dhanka ah Xanuunka daba-dheeraada
Waxaan ku taageernaa qof walba oo qaba xanuun daba dheeraada halganka waxaan rajeyneynaa inaad ku taageeri doonto shaqadeena adoo door bidaaya bartayada internetka Facebook oo rukumo kanaalkeena fiidiyowga ah at YouTube. Waxaan sidoo kale rabnaa inaan tilmaan ka siino kooxda taageerada Rheumatism iyo Xanuunka dabadheeraad - Noorwey: Daraasad iyo warar - oo ah koox Facebook ah oo bilaash ah oo loogu talagalay kuwa qaba xanuunka joogtada ah halkaas oo aad taqaano macluumaadka iyo jawaabaha.
Waa in diiradda la saaro cilmi-baarista loogu talagalay xaalad saameynaysa dad badan - taasina waa sababta aan si naxariis leh kuugu codsaneyno inaad la wadaagto maqaalkan baraha bulshada, doorbideyna boggayaga Facebook oo waxaad tidhaahdaan, "Haa si cilmi baadhis dheeraad ah loogu sameeyo fibromyalgia". Sidan ayaa qofku ka dhigi karaa 'cudurka aan la arki karin' si muuqata oo muuqata.
Jimicsi Gaaban iyo Jimicsi
Waxaa muhiim ah in la ogaado xaddidaadyadeeda si looga fogaado “gubashada” iyo ka sii daridda. Sidaa darteed, waxaa ka wanaagsan in la isku dayo tababar joogto ah oo xoog leh halkii laga qaadan lahaa "qabashada kabtanka", sida tan dambe haddii, haddii si khaldan loo sameeyo, jirka dheelitir la aanta keeni karo xanuun badan.
Sidoo kale aqri: 7 Waxyaabaha Lagu yaqaan Kartida Fikri Kari kara Fibromyalgia
Guji sawirka kore si aad u aqriso maqaalka.
1. Nasashada: Farsamooyinka Neefsashada & Acupressure
Neefsashadu waa aalad muhiim u ah dagaalka ka dhanka ah murqaha murqaha iyo xanuunka laabatada. Neefsashada saxda ah, tan waxay sababi kartaa dabacsanaan kordhinta qafiska feeraha iyo ku xirnaanta muruqyada laxiriira taas oo iyana horseedaysa hoos u dhaca xiisadda murqaha.
Mabda'a ugu weyn ee waxa loo arko inuu yahay farsamada ugu horeysa ee aasaasiga ah ee neefsashada qoto dheer waa in la neefsado oo laga saaro 5 jeer hal daqiiqo gudaheed.. Qaabka lagu gaadho tan ayaa ah inaad si qoto dheer u neefsato oo aad tiriso illaa 5, ka hor inta aadan si xoog ah u buuxsan oo mar labaad tirinin 5.
Daaweeyaha ka dambeeya farsamadan ayaa ogaadey in tani ay saameyn fiican ku leedahay kala duwanaanshaha garaaca wadnaha ee la xiriira xaqiiqda ah in lagu sii deynayo soo noqnoqoshada sareyso sidaasna ay diyaar ugu tahay la dagaallanka falcelinta culeyska fekerka.
Farsamo kale oo la yaqaan oo neefsashadu waa neefsashada iska caabbinta. Tani waa inay jidhka ka dhigtaa mid nasasho leh oo u galo meel nasasho badan. Farsamooyinka neefsashada waxaa lagu sameeyaa iyada oo si qoto dheer loo neefsanayo ka dibna laga soo baxo afka ku dhawaad ​​- si ay bushimaha u haynin masaafad sidaas u weyn oo ay tahay inaad 'ku riixdid' hawada iska caabbinta.
Sida ugu fudud ee loo sameeyo 'iska caabbinta neefsashada' waa in lagu neefsado afka ka dibna sanka laga baxo.
Ku nasashada oo leh Acupressure Mat
Is-cabbir wanaagsan oo lagu dejiyo xiisadda muruqa ee jirka ayaa noqon karta isticmaalka maalin kasta derin acupressure (fiiri tusaalaha halkan - xiriiriye wuxuu ka furaa daaqad cusub). Waxaan kugula talineynaa inaad ku bilowdo kulamo qiyaastii 15 daqiiqo ah ka dibna aad ka shaqeyso ilaa kulamo dhaadheer maadaama jirku uu u dulqaadanayo dhibcaha duugista. Guji iyada si aad wax badan uga akhrido gogosha nasashada. Waxa aad u fiican oo ku saabsan kala duwanaanshahan aan ku xidhno waa in ay la timaaddo qayb qoorta ah taas oo sahlaysa in laga shaqeeyo dhinaca muruqyada qoorta.
2. Kuleylinta iyo isukeeninta
Qallafsanaanta wadajirka ah iyo xanuunka murqaha badanaa waa qayb caajis ah oo nolol maalmeedka ah kuwa ay saameeyeen fibromyalgia. Sidaa darteed, aad bay muhiim u tahay in jidhku ku socdo kala bixin joogto ah iyo dhaqdhaqaaq iftiin ah maalintii oo dhan - fidinta joogtada ahi waxay dhab ahaan sababi kartaa kala-goysyada inay si fudud u dhaqaaqaan oo dhiiggu u qulqulo muruqyo adag.
Tani waxay si gaar ah run ugu tahay kooxaha murqaha waaweyn sida muruqyada, muruqyada lugta, murqaha kursi, dhabarka, qoorta iyo garabka. Maxaad iskudaydeysaa inaad maalinta ku bilowdid fadhi fidin fudud oo loogu talagalay kooxaha murqaha weyn?
3. Jimicsiga Dharka oo Dhammeystiran oo loogu talagalay Dhabarka iyo Qoorta
Layligani si fidsan ayuu u fidaa oo abaabulaa laf dhabarta.
Kala Bixinta: Kadib hoos u dhig badhidaada dhinaca ciribtaada - dhaqdhaqaaq deggan. Xusuusnow inaad ilaaliso qalooca dhexdhexaad ee laf dhabarta. Qabo fidinta ilaa 30 sekan. Kaliya dhar inta aad ka raaxeysaneyso.
Intee jeer? Ku celi jimicsiga 4-5 jeer. Layliga waxa la samayn karaa 3-4 jeer maalintii haddii loo baahdo.
4. Tababbarka barkadaha biyaha kulul
Dad badan oo qaba cudurka fibromyalgia iyo xanuunnada murqaha ayaa ka faa'iideysta tababbarka barkadda biyaha kulul.
Inta badan dadka qaba fibromyalgia, laabotooyinka iyo xanuunka daba dheeraada waxay og yihiin in jimicsiga biyaha kulul uu noqon karo mid aad u jilicsan - iyo in ay fiiro gaar ah siiso kala-goysyada qallafsan iyo murqaha xanuunka.
Waxaan nahay aragtida ah in tababarka barkadaha biyaha kulul ay noqdaan aag fiiro gaar ah looga hortago iyo daaweynta muruqyada muddada dheer iyo xanuunnada wadnaha. Nasiib darrose, runtu waxay tahay in deeqaha noocan oo kale ah ay had iyo jeer u xidhan yihiin baahi yaraanta dawladda hoose awgeed. Waxaan rajeyneynaa in qaabkan loo weeciyay iyo in mar kale diiradda lagu saarayo qaabkan tababarka.
5. Jimicsiyada Dharka Gogoldhaafka ah iyo Tababbarka Dhaqdhaqaaqa (oo leh VIDEO)
Halkan waxaa ah xulashada layliyada loo habeeyey kuwa qaba fibromyalgia, xanuunada kale ee xanuunka daba dheeraada iyo xanuunada lafaha. Waxaan rajeyneynaa inaad u hesho faa'iido - iyo inaad adiguba doorato inaad la wadaagto iyaga (ama maqaalka) asxaabtaada iyo asxaabtaada kuwaas oo iyaguna qaba isla cudurkaaga.
VIDEO - 7 Jimicsi oo loogu talo galay Rheumatists
Fiidiyowgu ma bilaabmin markii aad riixdid? Isku day cusboonaysiinta biraawsarkaaga ama si toos ah uga daaya kanaalkayaga YouTube. Sidookale xasuusnow inaad kuxiriirto kanaalka hadii aad rabto barnaamijyo tababar iyo jimicsi dheeri ah
Kuwo badan oo leh fibromyalgia sidoo kale mararka qaarkood waa jahwareer ronaanayaa xanuun iyo shucaac lugaha. Samaynta jimicsiga fidinta iyo tababarka jimicsiga sida hoos lagu muujiyey abaabul fudud ayaa kuu horseedi kara firfircoonida murqaha oo yaraada iyo murqaha oo yaraada - taas oo iyaduna sababi karta sciatica oo yar. Waxaa lagugula talinayaa inaad 30-60 ilbiriqsi ku kala bixiso 3 qaybood.
VIDEO: 4 Jimicsiyada Dharka Loogu Talagalay Cudurka 'Piriformis Syndrome'
6. Yoga iyo Maskaxda
Yoga waxay noo dejin kartaa annaga oo leh fibromyalgia.
Mararka qaarkood xanuunku wuxuu noqon karaa mid xad dhaaf ah ka dibna waxay noqon kartaa mid faa'iido leh in la isticmaalo jimicsiyo yoga dabacsan, farsamooyinka neefsashada iyo fekerka si loo soo celiyo xakamaynta. Qaar badan ayaa sidoo kale isku dara yoga derin acupressure.
Markaad ku tababarto yoga marka lagu daro daweynta, waxaad si tartiib tartiib ah u gaari kartaa xakameyn wanaagsan oo naftaada ka fogaan kartaa xanuunka marka ay ugu xun yihiin. Kooxda yoga sidoo kale waxay ku fiicnaan karaan la xiriirta bulshada, iyo sidoo kale inay noqon karto goob ay ku kala weydaarsadaan talobixinta iyo khibradaha la xiriira daweynta iyo jimicsiyada kala duwan.
Halkan waxaa ah xoogaa jimicsi yoga ah oo kala duwan oo la isku dayi karo (xiriiriyeyaasha furitaanka daaqad cusub):
- 5 Jimicsiyada Yoga ee Xanuunka Hip
- 5 Jimicsiyada Yoga ee Xanuunka Dhabarka
- 5 Jimicsiyada Yoga Ka dhanka ah Stiff Neck
Lagu taliyay is-Caawinta Rheumatism iyo Xanuunka daba dheeraada
Kareemka Arnica eller qaboojiyaha (warbixino dhowr ah oo ku saabsan horumarinta isticmaalka)
Soo koobid: Farsamooyinka jimicsiga iyo nasashada ee kuwa qaba Fibromyalgia
Fibromyalgia waxay noqon kartaa dhibaato aad iyo aad u xun oo nolol-maalmeedka ka mid ah.
Sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah in la ogaado jimicsiyada jilicsan ee sidoo kale ku habboon kuwa leh dareen sare ee dareenka xanuunka ee murqaha iyo kala goysyada. Qof walba waxaa lagula taliyaa inuu ku biiro kooxda taageerada Facebook si lacag la’aan ah Rheumatism iyo Xanuunka dabadheeraad - Noorwey: Daraasad iyo warar Meeshaad kula hadli karto dadka isku fikirka ah, la soco wararka ku saabsan mowduucan oo aad isweydaarsato khibradaha.
Mar labaad, waxaan jeclaan lahayn inaan ku weydiino inaad la wadaagto maqaalkan warbaahinta bulshada ama bartaada blog (dareemo xor u ah inaad si toos ah ugu xirto maqaalka). Fahamka iyo diiradda la kordhiyo waa tallaabada ugu horreysa ee nolol maalmeedka wanaagsan kuwa qaba fibromyalgia.
Talooyin ku saabsan Sida loo Caawiyo
Xulashada A: Si toos ah ugu wadaaga FB - Nuqul cinwaanka mareegaha oo ku dheji boggaaga facebook ama koox facebook ku habboon oo aad xubin ka tahay. Ama riix badhanka "SHARE" ee hoose si aad ugu sii wadaagto boostada facebook -gaaga.
(Halkan guji si aad ula wadaagtid)
Aad ayaan kuugu mahadnaqayaa qof kasta oo gacan ka geysta kor u qaadista fahamka fibromyalgia iyo ogaanshaha xanuunka dabadheeraad.
Xulashada B: Si toos ah ugu xiriir qormada bartaada.
Xulashada C: Raac oo isleeg Boggayaga Facebook (riix halkaan haddii aad rabto)
Su'aalo? Mise waxaad doonaysaa inaad ballan ka qabsato mid ka mid ah rugahayada xidhiidhka la leh?
Waxaan bixinaa qiimeyn casri ah, daaweyn iyo baxnaanin xanuun dabadheeraad ah.
PAGE xiga: - Cilmi baaris: Kani waa Cunnada ugu Fiican Fibromyalgia
- Xor ayaad u tahay inaad raacdo Vondt.net at YouTube
- Xor ayaad u tahay inaad raacdo Vondt.net at Facebook
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/6-øvelser-mot-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2017-09-12 15:45:552022-03-22 15:39:076 Layliyo loogu talagalay kuwa qaba Fibromyalgia
6 jimicsi yoga ah oo loogu talagalay Murugada
16 / 08 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
Cadaadis Miyaa? Halkan waxaa ah 6 Jimicsi Yoga ah oo kaa caawin kara inaad is dejiso oo aad yareyso xiisadda murqaha. Xor baad u tahay inaad la wadaagto qof walaac qaba.
Jimicsiyada Yoga iyo yoga waxay noqon karaan kuwo faa iido leh marka ay timaado nasashada iyo nasashada nolol maalmeed badan. Is-fidinta iyo dhaqdhaqaaqa joogtada ah waxay noqon karaan qiyaas wanaagsan oo looga hortago murqaha kacsan iyo kala-goysyada adag. Isku day inaad u qoondeyso 20-40 daqiiqo maalin kasta tan, markaa waxaad awoodi doontaa inaad dareento horumar weyn.
1. Sukhusana (Booska Madadaalada)
Xaalladda yoga waxay sii deyneysaa diaphragm-ka waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ku neefsato calooshaada. Ku fooganow inaad is dejiso oo aad si qoto dheer u neefsato calooshaada. Neef dheer ku qabo sankaaga ka dibna si tartiib ah uga neefso afkaaga. Ku celceli 30-40 neefsasho.
Meel nasasho yoga ah oo kordhisa dhaqdhaqaaqa sinta iyo kursiga. Way fidsan tahay waxayna siinaysaa dabacsanaan badan gaar ahaan dhabarka hoose. Raadi booska ay si fudud u kala bixinayso oo ku hay 30 ilbidhiqsi ka hor intaadan ku celcelinin xirmooyinka 3-4.
Meel yoga ah oo aad runtii ku sii deyn karto xiisad iyo xiisad. Tani waxay kala bixineysaa dhabarka oo dhan qeybta hoose ilaa laga gaarayo u gudbida qoorta - muruqyada aan wada ognahay inay adkaan karto in loo kala bixiyo si wanaagsan. Way fidsan tahay waxayna siinaysaa dabacsanaan badan dhabarka hoose iyo kore. Jilbahaaga istaag oo jirkaaga horay ha uusoo taago gacmo fidsan sida sawirka ka muuqata - hubi inaad tan ku sameyso dhaqaaq xakameysan, deggan. Raadi booska ay si fudud u kala bixinayso oo ku hay 30 ilbidhiqsi ka hor inta aanad ku celcelin 3-4 nooc
4. «5-farsamo» (Farsamada neefsashada qoto dheer)
Mabda'a ugu weyn ee farsamada neefsashada aasaasiga ah ee aasaasiga ah waa in la neefsado oo la baxo 5 jeer hal daqiiqo gudaheed. Dariiqa lagu gaari karo tan waa in la qaato neef qoto dheer oo loo tiriyo 5, ka hor inta aan si weyn loo neefsan oo mar labaad loo xisaabiyo 5. Aasaasayaasha farsamada ayaa qoraya in tani ay saameyn fiican ku yeelan karto kala duwanaanta heerka garaaca wadnaha ee la xiriirta tan loo dejinaayo heer sare iyo sidaas awgeedna aad ugu diyaargaroobay la dagaallanka falcelinta culeyska fekerka. Farsamadan neefsashada waxaa lagu dari karaa booska yoga ee Sukhusana.
Jimicsi wax ku ool ah oo sii deynaya xiisadda qoorta iyo garbaha. Istaag afarta lugood ka dibna kursiga si tartiib ah kor ugu qaad saqafka - illaa aad ka gaarto booska sawirka. Ku hay jagada qiyaastii 30-60 ilbiriqsi (ama intaad awooddo) ka dibna si tartiib ah mar labaad hoos ugu dhig dhulka. Layligu wuxuu u hawlgaliyaa qaabdhismeedka saxda ah iyo muruqyada ku hareeraysan garbaha si wanaagsan. Ku celi in ka badan 4-5 nooc.
Kuwani waa jimicsiyo yoga wanaagsan oo ay habboon tahay in la sameeyo maalin kasta si ugu badnaan saameyn loogu yeesho - laakiin waxaan ognahay in maalmaha shaqada ee xiisaha badan aysan had iyo jeer oggolaan tan, sidaas darteed waxaan u maleyneynaa inaad fiicantahay xitaa haddii aad sameysid maalin kasta oo kale.
Dhammaan adiga ayey kugu xiran tahay. Raadi waxa adiga kuu shaqeynaya bilowga oo si tartiib tartiib ah u dhis laakiin hubaal inaad horay u socoto. Tani waxay noqon kartaa waqti qaadasho laakiin geedi socod aad u faa'iido badan. Haddii aad leedahay baaris, waxaan kaa codsaneynaa inaad weydiiso takhtarkaaga haddii jimicsiyadan ay faa'iido kuu yeelan karaan adiga - waxaa suuragal ah inaad si taxaddar leh isugu daydo naftaada. Waxaan si kale kugu dhiirigalinaynaa inaad dhaqaaqdo oo aad lugeeysid dhul qallafsan haddii ay suurogal tahay.
Waxaan nahay mid adeeg lacag la'aan ah halkaas oo Ola iyo Kari Nordmann ay jawaabo uga heli karaan su'aalahooda adeeggayaga baarista bilaashka ah oo ku saabsan dhibaatooyinka caafimaad ee muruqyada - gebi ahaanba lama garanayo haddii ay doonayaan. Boqolaal ayaa horeyba uhelay caawimaad - ee maxaad sugeysaa? Nala soo xiriir annaga oo aan waajib lahayn maanta!
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Yoga-mot-stress.jpg?media=1648573622 650 1000 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-08-16 17:18:412022-03-18 17:27:366 jimicsi yoga ah oo loogu talagalay Murugada
Bogga 1 ee 34123>»